Tag: akwụkwọ | Martech Zone
M na-anwale a ton nke dị iche iche prototyping ngwaọrụ ike izipu osisi na okirikiri nhọrọ ukwuu ọrụ interface ọcha… ma m na-gravitated azụ akwụkwọ. Ikekwe ọ bụrụ na m zụrụ ihe osise, m nwere ike inwe ihu ọma… Abụghị m igwe ojii ma a bịa n'ịbịaru (ma). Tinye POP, ngwa ngwa ma ọ bụ mbadamba nke na-enye onye ọrụ ohere ijikọta foto nke akwụkwọ akụkọ gị na hotspot maka mmekọrịta. Ọ mara ezigbo mma! Malite site na ịbịaru